Igbe agba aja aja na agba aja aja Akwado Akwukwo-Akwukwo Pube.
Igbe agba aja aja Akwụkwọ Brown na-ebi akwụkwọ
Model Number: CTB201802-004
Akwukwo cylinder brown wax
igbe akara ederede ọkpọkọ
Everchọtala igbe igbe dị oke egwu dị ka igbe ọkpọ agba aja aja a na-ebi akwụkwọ? Azịza ya ga-abụ mba. Site na ụdị ihe pụrụ iche na ụcha dị ndụ iji mee ka igbe ahụ bụrụ igbe nkwakọ zuru oke, o siri ike ịchọta egwuregwu. Igbe cylinder aja aja na-acha aja aja dị mma ma maa mma. Akwukwo ohuru Akwukwo a kapiri eji edeputa ihe. Nwere ike ịrịọ maka mgbanwe njirimara dịka akara gị na otu ọ bụla ga-emepe ya ka o zuo oke. Igbe a na-akwakọ ngwaahịa dị mma maka oriri na ihe ndị ọzọ. Otu nwekwara ike iji ya tinye onyinye ha n’ime. Igbe mara mma nke nwere ihe ịtụnanya dị ịtụnanya bụ nke a ga-enwerịrị ndị na-efe ịpụ iche.
Eperede igbe dị elu nke igbe agba aja aja nke a na-ebi akwụkwọ dị mfe iji aka. Ezubere ya nke ọma ịghara idobe ya oke ma ọ bụ sie oke ike. Gosipụta ịhụnanya gị site na iji ya kpuchie ya.
Mpempe akwụkwọ Igbe ngwugwu ngwugwu
Ọ bụrụ na ị na-achọ igbe ndozi zuru oke maka idobe ihe ndị a na-eri eri, ọ dị igbe igbe agba aja aja nwere mbipụta bụ ihe ịchọrọ. Ọ dị mfe ịnweta ma bụrụ nke a haziri nke ọma iji hụ na nchekwa nke ihe oriri gị, igbe nnabata a bụ ihe pụrụ iche, ọ bakwara uru iji mefu ego. Akara akara nke elu igbe dị kwa na ihe nhazi. You nwere ike ịrịọ maka ịgbanwe ya dịka nke ika gị, anyị ga-ahụ n ’ịnata igbe dịka ịchọrọ. Anyị na-achọ ịnọ oge n'oge ọ ga-emezu iwu gị yana ngwugwu gị ga-erukwa n'oge.